လာမယ့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကား အဖြစ် ကူးပြောင်းတော့မယ့် Lincoln Corsair ! – MyMedia Myanmar
လာမယ့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကား အဖြစ် ကူးပြောင်းတော့မယ့် Lincoln Corsair !
Ford Motor Company ရဲ့ လျှပ်စစ်ကား ကူးပြောင်းမှု အခန်းကဏ္ဍ တွေမှာ ဆိုရင် All-Electric F-150 နဲ့ အရှိန် ကောင်းနေခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ နောက်မှာတော့ Mustang Mach-E ကိုလာမယ့် နှစ်တွေမှာ ဆက်လက် အရှိန်မြှင့် ထုတ်လုပ် ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Ford ရဲ့ ဇိမ်ခံ အမျိုး အစား တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Lincoln အနေနဲ့ ကလည်း လာမယ့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်ကစလို့ သူတို့ရဲ့ ကားမော်ဒယ်တွေကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ဘက်ကို ကူး ပြောင်းတော့မယ်လို့ သိထားရပါပြီ။ အဆိုပါ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ Automotive News ကနေ တစ်ဆင့် AutoForecast Solutions LLC Report ကနေ သိရှိလာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး Lincoln Corsair အမျိုးအစားဟာလည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Powertrain ကို ရရှိ လာမယ်လို့ ပါ အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်က ဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြချက်‌တွေ အရတော့ Corsair-E လို့ ခေါ်တွင်လာနိုင်တဲ့ အဆိုပါ လျှပ်စစ်ကားအသစ်ဟာ လာမယ့် စက်တင်ဘာ လ ၂၀၂၆ မှာ စတင် ထုတ်လုပ်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ Canada စက်ရုံမှာ တည်ရှိတဲ့ Oakville ၊ Ontario မှာ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်တော့မှာပါ။
AutoForecast ရဲ့သတင်း အရတော့ အဆိုပါ Crossover ဂာ Ford နဲ့ Lincoln ဆီက အခြားသော လျှပ်စစ်ကားတွေကို တည်ဆောက်ရာ မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Dedicated Platform ကိုပဲအသုံးပြု လာနိုင်တယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ FoMoCo ကတော့ ကနေဒါ စက်ရုံ အတွင်းမှာ တင် လျှပ်စစ်ကား အမျိုး အစား ၅ မျိုး လောက် အထိ ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ထားပြီး Brand နှစ်ခု စလုံးက မော်ဒယ်တွေကို ရောပြီး ထုတ်လုပ်လာနိုင်ကာ ပထမဆုံး ကားမော်ဒယ် စတင် ထုတ်လုပ်မှုကိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၅ လောက်မှာ ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ် ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Lincoln အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံး Corsair-E အမျိုးအစားကို အခြားသော ပုံမှန် Combustion စွမ်းအင် အသုံးပြုထားတဲ့ ကားနဲ့လည်း တွဲဖက်ပြီး ရောင်းချလာနိုင်ပါသေးတယ်။ Lincoln ရဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ အခြားသော သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြချက် အရ ဆိုရင် Ford အနေနဲ့ လည်း သူတို့ရဲ့တံခါးနှစ်ပေါက်ပါ Mustang ကား အမျိုးအစားကိုလည်း ပြန်လည် ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီး လာမယ့် ၂၀၂၈ မှာ ဖြစ်လာနိုင်ကာ ၂၀၂၉ Model Year အတွက် အဓိက ရည်ရွယ် လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော အဆိုပါ အနေအထား ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အတွက်တော့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု လောက် နီးပါး ကို စောင့်ဆိုင်းရဦးမှာပါ။ အဆိုပါ သတင်းဖော်ပြချက် အရတော့ အမျိုး အစားသစ်ဟာ မျိုးဆက်သစ် Mustang ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဆိုလိုတာ ကတော့လက်ရှိ မျိုးဆက် ကို နောက်ထပ် ၇ နှစ် လောက် အထိကို ဆက်လက်ထားရှိမယ့် သဘောပါပဲ။
ဒီ အခြေအနေကတော့ ကားအသစ်ထုတ်ကုန် နဲ့ ပက်သက်ပြီးအဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ အတွက် နှစ်အတော်လေး ကြာသွားမယ်လို့ပဲ ဆိုရတော့ မှာပါ။ Lincoln ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကူးပြောင်းရေး ဆိုင်ရာ သတင်းတွေဟာ ယခုနှစ် အစောပိုင်း လောက်ကစပြီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ကာ Rivian နဲ့ စီစဉ် ထားတဲ့ သဘော တူညီမှုတွေ မရေမရာ ဖြစ်နေပြီး တစ်နှစ်လောက် အကြာမှာ အခုလို ဖြစ်လာခဲ့ တာပါ။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု ကတော့ ကြီးမားတဲ့ Lincoln Crossover တစ်စီးကို အတူတကွ ပူးပေါင်း ဖန်တီးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပြီး Rivian ရဲ့ Skateboard Platform အပေါ်မှာ တည်ဆောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကာ လာမယ့် ၂၀၂၂ လောက်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့တောင် သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါ အမျိုး အစားနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတွေကတော့ အခြားမတူညီတဲ့ကားတစ်စီးကို ဖန်တီးနေသယောင် အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ပြီး အခုချိန်အထိတော့ ကားရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေဟာ လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ရပ် အဖြစ်ရှိနေဆဲပါ။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုရဲ့ အစီအစဉ် တွေကို ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးက ရပ်တန့်သလို ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် အခုလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ထားမှုကနေ ဘယ်လိုမျိုး စိတ် လှုပ်ရှားစရာတွေအဖြစ် ရောက်ရှိလာမလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်နေပါသေး တယ်။
The post လာမယ့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကား အဖြစ် ကူးပြောင်းတော့မယ့် Lincoln Corsair ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-22T12:00:31+06:30January 22nd, 2021|MYCARS MYANMAR|